Askar lagu dilay degmada Walanweyn & dagaal ka socda - Awdinle Online
Askar lagu dilay degmada Walanweyn & dagaal ka socda
Wararka laga helayo degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in uu halkaasi ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidamo ka tirsan Daraawiishta Koonfur Galbeed & Maleeshiyo Beeleed ku sugan degmadaas.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalka uu yimid, markii maleeshiyaad hubeysan ay weerar ku qaadeen bar-koontorool oo Ciidamada ku leeyihiin Bartmaha magaalada gaar ahaan xaafada Muuri ee degmada Walanweyn.
Maleeshiyaadka hubeysan ayaa waxaa la sheegay inay dileen afar ka tirsan ciidamada daraawiishta koonfur Galbeed taas oo keentay in uu dagaal salka ku haaya isku qabsiga Barta koontorool oo lacago lagu qaado uu bilaawdo.
Barta-koontorool ee lagu weeraray Ciidamada ka tirsan daraawiishta koonfur Galbeed ayaa dhowr jeer uu dagaal ka dhacay, kadib markii ay weerareen maleeshiyaad degaanka ah.
Previous articleCiidamada dowladda oo dagaal kula wareegay degaan ay ku sugnaayeen Al-Shabaab
Next articleAl-Shabaab oo la wareegay degaan ka tirsan gobolka Sanaag